Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Musawac oo Sanadguuradoodii 7aad Xusay.
OYSU Musawac oo Sanadguuradoodii 7aad Xusay.
Maanta oo Axad ah taariikhduna ay kubeegantahay 30/7/17 waxaa magaalada Musawac ee wadanka Eritrea lagu qabtay xaflad aad ubalaadhan oo ay soo qaban qaabiyeen Ururka Dhalinta iyo Ardayda Ogadenia OYSU fariciisa Musawac.
Xafladan ayaa lagu maamuusayay sanadguurad 7 ee kasoo wareegtay aas’aaskii faraca OYSU ee kahowlgala magaalada Musawac, waxaana hoolka xaflada lagu qabtay soobuux dhaafiyay dadwayne aad utiro badan oo kakala yimid xaafadaha magaalada musawac iyo deegaanada kuxeeran.
Ugu horaynba waxaa xaflada lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay Sheekh Cabdi Maalig oo kamid ah culumada Jaaliyada Ogadenia ee Musawac, wuxuuna sheekhu dadwaynaha xasuusiyay cabsida Allaah.
Intaas kadib waxaa xaflada laga akhriyay taariikhda halganka Ogadenia oo kooban iyo waliba wararkii ugu dambeeyay ee gudaha iyo dibada Ogadenia, waxaana bulshada lala socodsiiyay warar badan oo ay ubaahnaayeen.
Intaas kadib Xoghayaha OYSU ee faraca Musawac mudane Mahad Xuseen Jaamac iyo gudiga lashaqeeya ayaa bixiyay Shahaado Sharafeedyo ay siiyeen dhalinyaro lagu xushay shaqo wanaagooda iyo firfircoonidooda.
Sidoo kale waxaa khudbado qiimo badan laga dhagaystay qaar kamid ah mas’uuliyiintii iyo Kaadirkii xaflada kasoo qayb galay waxaana khudbadaha maanta diirada lagu saaray sidii looga faa’iidaysan lahaa burburka soo foodsaaray wadanka Gumaysiga Itoobiya.
Gabagabadii waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysay xaflada kusoo xidhay Gudoomiyaha Jaaliyada Ogadenia ee Musawac mudane Irshaad, wuxuuna gudoomiyuhu amaanay gudiga ururka OYSU isagoo ugu hambalyeeyay sanadguuradooda.